Roblox avatars: otu esi enweta ọtụtụ agba na avatars ọhụrụ | Nzukọ mkpanaka
Roblox bụ, n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị amaghị ya, egwuregwu efu nke jisiri ike gafere Minecraft, Lego Worlds, Terraria na ndị ọzọ nwere otu ụdị na ọnụọgụ. N'oge a, ọ bụ ihe ịga nke ọma n'ụwa niile na akụkụ ya bụ n'ihi na ọ dị nfe ma dịkwa mma. Ọdịdị ya mara mma nke ukwuu ma dabere na robots na cubes, nke mepụta avatars Roblox. N'ezie, aha egwuregwu vidiyo na -esite ebe ahụ, n'agbanyeghị na na mbụ a kpọrọ ya Dynablocks.
Gịnị bụ Roblox, ebe ibudata ya na ihe kpatara ya ji ama ama
Dịka anyị gwara gị, ikpo okwu Roblox adịla afọ ole na ole, n'ezie ndị injinia abụọ si United States mụrụ ya na 2003. Ka oge na -aga, nke nta nke nta obodo na -ebu nnukwu ibu nke na ọ banyela 200 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ọnwa. Ọbụlagodi na ị bụ onye na -akwado mgbakọ, ị ga -enwe mmasị ịmara na Roblox nwere mgbakọ nke ya akpọrọ Bloxcom. N'ime ya, ndị okike niile na -ezukọ na obodo wee na -ekwu maka nkwalite, maapụ 3D na ụdị ihe niile.
Otu akụkụ dị iche na Roblox na egwuregwu vidiyo ndị ọzọ bụ na ị nwere ike imepụta maapụ 3D wee ree ya na ego egwuregwu akpọrọ Robax. Mgbe ahụ ị nwere ike gbanwee ego egwuregwu ahụ ka ọ bụrụ dollar wee si otú a na -enweta nnukwu uru. Ka ọ dị ugbu a, enwere ndị mmadụ ebiela n'ụzọ dị otu a. Maka ozi ndị ọzọ gbasara akụkụ a, anyị ga -agwa gị naanị na nha nha bụ dollar 1 na 500 Robax. Ọ bụrụ na egwuregwu ejigidere ihe ọ bụla, ọ bụ n'ihi ịhazi onwe ya nke minigames na karịa ihe niile, n'ihi Roblox avatars nke na -amasị ha nke ukwuu. Anyị ga -akụziri gị otu esi enweta ọtụtụ agba na avatars ọhụrụ.
1 Roblox avatars: otu esi enweta ọtụtụ agba na avatars ọhụrụ
1.1 Nweta ihe n'efu na Roblox
2 Ngalaba nke ị nwere ike nweta ihe dị iche iche maka avatar gị n'efu
2.3 Ihe ngosi
Iji malite, ị ga -ama otu esi ahazi agwa gị na Roblox, n'ihi na ihe niile nwere mmalite. Na mbụ, ị ga -enwe avatar na -enweghị nhazi, mana iji malite ịgbanwe ya, ị ga -emerịrị usoro ndị a:
Nke mbu, budata Roblox na mepụta akaụntụ gị ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere otu, banye na ya.
Ugbu a, ị ga -aga na isi interface wee chọta bọtịnụ menu ndọpụta, ọ bụ ihe ahịrị atọ kwụ ọtọ. Ha nọ n'elu.
Na menu ndọpụta a ị ga-enwe ike ịhụ nhọrọ nke Avatars. Ọ bụ ebe ahụ ka ị ga -akwa avatars Roblox asị.
Ugbu a, ị ga -ahụ na ị nwere ike ịgbanwe agwa gị kpamkpam. Ị ga -aga jụ ihe, ọ ga -egosikwa gị ihe ndị ahụ nke ị nwere ma nọrọ na ndepụta. Ị nwere ike ịhụ na e nwere ụdị ihe dị iche iche: uwe, ahụ, uwe, ihe nkiri na ọtụtụ ndị ọzọ. Gagharịa gburugburu ha ka ị hụ ka ihe niile siri chọọ gị.
Ịhazi avatar gị sara mbara ma nwee ike were obere oge, echegbula. Nke a dị mkpa ma a bịa na egwuregwu ebe gị na ndị ọzọ na -emekọrịta ihe. Ị ga -aga iri. Anyị na -adụ gị ọdụ ka ị jiri echiche gị wee bụrụ nke kacha mma. N'ezie, ịnwere ike ịchọta ihe nwere ọnụ ahịa, a ga -enwerịrị nke ahụ n'ụzọ ndị ọzọ.
Ugbu a anyị ga -egosi gị otu esi enweta ụfọdụ ihe efu iji mee ka avatar gị yie ihe na -adọrọ mmasị karịa na maapụ 3D ọ bụla ị na -egwu.
Nweta ihe n'efu na Roblox
Will ga -ahụ ọtụtụ narị ihe na Roblox nke enwere ike ịgbakwunye na avatar gị mana ga -akwụ ụgwọ na aka gị bụ ịdọpụta kaadị ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụrụ na ịchọghị, anyị ga -agwa gị otu esi enweta ihe ole na ole maka avatar gị n'efu.
Obere ntakịrị ka ị na -amalite idezi avatar, Roblox ga -egosi gị ụfọdụ ihe ma ọ bụ ihe ga -abịakwute gị na -eseghịdị ya, ikekwe ụfọdụ n'efu, mana ọ bụghị ihe nkịtị. Mgbe ọ bụla ịchọrọ, ị nwere ike banye n'ụlọ ahịa egwuregwu ahụ n'onwe ya nwere wee lekwasị ya anya. N'ezie, n'ụzọ dị otú a ị ga -ahụ ihe efu niile dịnụ. Ọ bụrụ na ịmaghị otu esi aga ebe ahụ, anyị na -egosi gị otu esi eme ya:
Iji bido, ị ga -abanye ụlọ ahịa Roblox Avatars. Mgbe nke a gasị, ị nwere ike gaa na nchọta ọchụchọ wee pịnye mkpụrụ okwu ozugbo "n'efu". Ị nwere ike ịchọta otu nzacha ahụ n'ime ọnụahịa ahụ, ọ naghị esiri ha ike ịchọta n'ụlọ ahịa, ha nọ n'aka ekpe nke interface ahụ. Ugbu a, ị ga -ahụ ihe efu niile, eserese na -enweghị ihe ọ bụla na uwe efu niile ị nwere ike ịchọta ma tinye na ndekọ akaụntụ gị.
Dị ka anyị na -ekwu, ugbu a, ị ga -ebu ihe site na ihe wee tinye onye ọ bụla n'ime ngwa ahịa wee nwalee otu o si dabara gị wee kpebie ma ọ bara uru ma ọ bụ na ọ baghị. Ugbu a, ị ga -aga dezie avatar gị dịka anyị kọwara na paragraf ndị mbụ wee nọnyere nhọrọ kachasị mma nke ihe, uwe na ihe nkiri maka avatar Roblox gị.
Ngalaba nke ị nwere ike nweta ihe dị iche iche maka avatar gị n'efu
Ugbu a, anyị ga -egosi gị nke ọ bụla n'ime edemede ndị ị nwere ike ịhụ na ụlọ ahịa Roblox na karịa, ebe ị nwere ike nweta ihe maka avatar gị.
N'ebe a, ị ga -ahụ ngwa dị iche iche ị nwere ike tinye na avatar gị, dịka: ogologo ọkpa, t-shirts, akụrụngwa egwuregwu, okpu, iko, pendants, olu, akpa na ọtụtụ ndị ọzọ ihe ndị anyị na -ekwughi maka na ndepụta ahụ agaghị agwụ agwụ. Naanị kwụsị wee họrọ nke dabara gị nke ọma. Tinye aghụghọ ịgbakwunye ihe nzacha "efu" iji chọta ndị nweere onwe ha.
N'ebe a, ị ga -enwe ike hazie nsọtụ niile nke avatar gị: isi, toso, ogwe aka, ụkwụ na ndị ọzọ. Know mara, ogologo, pere mpe na ihe ịchọrọ dabere na otu ị siri were avatar gị ma ọ bụ naanị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ya na onyonyo gị na oyiyi gị, dịka ị nwere usoro iwu na agba.
Dị ka ọ dị na Fortnite, enwere eserese ebe a. Mmegharị ndị a niile dị ka ịgba egwu ị ga -enwe ike ịkpọghee ha ka gị na ndị ọrụ ibe gị wee maa jijiji nke ọma. N'ezie enwere ọtụtụ ndị na -enweghị usoro yana na ọ bụrụ na ị gwakọta ha n'ọdịdị dị mma ọ ga -eme ka ị pụọ iche nke ukwuu. Ndụmọdụ maka ihe nkiri ndị ọzọ dị mma: jiri ha mee ihe mgbe ị na -emegharị nke ọma, a ga -amara gị maka ya.
Ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ejiji ma ọ bụ ọbụna ihe ịchọrọ. Ọ bụrụ na Krismas ma ọ bụ HalloweenKwadebe ihe okike n'ihi na ị nwere ike yie avatar gị maka oriri ahụ wee chekwaa ya.
Anyị na -atụ anya na akụkọ ahụ masịrị gị na ugbu a, avatar gị kacha mma na Roblox niile. Hụ gị na edemede Mobile Forum na -esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Roblox avatars: otu esi enweta ọtụtụ agba na avatars ọhụrụ